Emegharịrị 12 "MacBook | Esi m Mac
Apple ka na ngwaahịa nke MacBook 12 ″ Refurbished
Jordi Gimenez | | MacBook, Mac kọmputa
Anyị ahụ ya ọhụụ na Apple enweghị 12 ″ MacBook ohuru edepụtara maka kọmpụta ma ọ bụ kọmputa arụzigharị. Apple na-agbakwụnye ụdị Mac niile na ngalaba a nke weebụ mgbe ọnwa ole na ole gafere kemgbe mmalite ya na n'ihe banyere MacBook ọhụrụ ọ nweghị.
All unu na-eso m si Mac maara na anyị mgbe niile gbachitere zuo nke a ụdị Mac na-weghachiri eweghachi na Apple na ha na-agbakwunye onye ọrụ gọọmenti otu afọ akwụkwọ ikike, o doro anya na ihe mere agbakwunye akụrụngwa na mma / weghachiri eweghachi ngalaba nwere ike ịbụ ọtụtụ, ma tumadi ha bụ ndị Macs nwere nsogbu na onye ọrụ na-ewe ha na Apple ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ na-enye ya a ọhụrụ ma ọ bụ ugbua rụziri na-emekwa ka ya rụkwaa. Mgbe idozi nke ikpeazụ, okirikiri na-aga n'ihu na Apple reintroduces ya n'ime wiil ma n'ụdị ire ere na ọnụ ala na doro anya, na-enweghị nsogbu ma ọ bụ mgbe onye ọrụ ọzọ jiri nsogbu bịa.
N'ihe banyere 27 'iMac Retina (a malitere ya mgbe 12 ″ MacBook gasịrị) anyị nwere site n'oge ruo n'oge ọtụtụ ụdị dị na ụlọ ahịa ndị America (nke na-abịakarị mbụ) yana ngalaba eweghachiri nke ụlọ ahịa Spanish, mana ihe ohuru a 12 ″ MacBook enweghi ebe ichota.
N'ụzọ doro anya, a ga-ere ihe ndị ọzọ iMac, MacBook Pro ma ọ bụ MacBook Ikuku karịa nke ọhụrụ 12 ″ MacBook, mana nnabata onye ọrụ nke ọhụrụ 12 ″ MacBook adịla ala nke na ha enweghị ohere ịgbakwunye Mac a na ụdị eweghachiri? Ma ọ bụ Ọ bụ na Apple anaghịzi agbanwe Macs dị mfe ma họrọ ịrụzi ha wee weghachite ha na ndị ahịa mgbe obere oge gasịrị?
Nka ọ na-iju anyị anya na mgbe asịrị banyere kwere omume melite nke otu egwuregwu a adịghị na ngalaba a nke ụlọ ahịa n'ịntanetị ọbụlagodi United States. Anyị ga-ahụ ihe niile a ma ọ bụrụ Apple na - eme “nhọrọ” na ngwaahịa ndị a ma ọ bụ na ha achọghị itinye ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » Apple ka na ngwaahịa nke MacBook 12 ″ Refurbished
Steve Jobs akwụkwọ